Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Njem gafere Obodo New York m, Koodu Zip Manhattan
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Enwere m ike nwee anyaukwu kaboodu juputara na Prada na LV, mana ihe m chọrọ ozugbo bụ ohere ịga njem na mpụga koodu Zip m n'enweghị nsogbu.
Ka m na -ege MSNBC, FOX na CNN, a na -adọ m aka na ntị maka ụdị COVID, mkpa na -apụta maka ịgba ume, ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ndị mmadụ na -arịa ọrịa na ọnwụ na -ezo n'akụkụ oke mmiri.
Ruo afọ abụọ, anọwo m na-ebi n'ụlọ m, na-eji ụjọ na-abanye n'ime obodo kpuchie nkpuchi, na-ezere ịkpọtụrụ ndị okenye, ụmụaka, na ndị nwere nsogbu mgbochi.
Ana m akpachapụ anya zere nkịta na anụ ụlọ ndị ọzọ, na -egbochi mmekorita onwe onye nye onye na -ahụ maka ọgwụgwọ anụ ahụ m, onye na -azụ egwuregwu, onye na -ere ego na nnukwu ụlọ ahịa, na onye na -anabata oche n'ihu ụlọ mgbatị ahụ m.
Nke a abụghị ụzọ iji bie ndụ COVID!
Tụọ mkpịsị aka | Onye ka ụta dịịrị?
Enwere ọtụtụ ịta ụta - malite n'isi onye World Health Organization (WHO) onye ihere na -emeghị ngwa ngwa ịchọpụta ọrịa na -efe efe mgbe ọ hụrụ otu.
A na -esochi onye odeakwụkwọ ukwu nke WHO mgbe ọ bịara ịta ụta site n'aka ndị isi ọrụ na -enweta nde kwuru nde n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ndị na -ejikọ ego ha nke ọma ịkpọ oku ihe mberede - ọbụlagodi mgbe ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike mere ka ọ mata ha. .
Ndị na -esote ndị a ga -ata ụta bụ ndị isi ọdụ ụgbọ elu nke na -echegbu onwe ha maka ịdabere na ọkwa karịa itinye ego iji kwalite sistemụ HVAC, dochie arịa ụlọ na ihe ndozi ya na ọgwụ mgbochi ma ọ bụ bute robots na teknụzụ ọhụrụ iji mụbaa arụmọrụ na -enweghị kọntaktị.
Ịta ụta bụkwa ndị isi ụgbọ elu. Ha na -ahọrọkarị izobe nọmba COVID n'azụ akwụkwọ mpịakọta na vidiyo dị oke ọnụ karịa ịkwalite sistemụ HVAC, jiri ngwaahịa ọgwụ mgbochi dochie akwa na ihe ndozi, ma ọ bụ tinye robots na ndepụta ndị ọrụ ha.
Ndị isi ọrụ a na -eso ndị isi njem a na -ebi na '' okpuru mmiri na -acha odo odo '' n'ihi na ha adịchaghị mma ma ọ bụ na -enweghị ike ịmata ọrịa ahụ ka ọ na -agafe oke ala ha, ọnụ ụzọ ha, ọnụ ụzọ ha, na tarmacs ha, na -awakpo obodo ha wee wakpo ha. ndị enyi, ezinụlọ, na ndị ọbịa. Ịdaba na apịtị a bụ ndị njem nlegharị anya nke ego ha na ịkpa oke mmụọ kpuru ìsì nke ukwuu ịghọta na mgbe ụfọdụ ọchịchọ na ihe na -egbu oge kacha mma maka ọdịmma ndị ọzọ ma ugbu a nwere ike ọ gaghị abụ oge kacha mma isonye na ọgba tum tum ọgba aghara ma ọ bụ ịerụrị ọ teamụ n'òtù egwuregwu. ya na narị otu narị na puku ndị njem nwere otu echiche.
Nkeji ọ bụla nke ụbọchị ọ bụla, pundits telivishọn nwere iwe ọkụ ihu igwefoto wee gwa ọtụtụ nde ndị na-ekiri na n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị niile siri ike, oge eruola ka anyị gafee nchekwa na-enyo enyo nke agbata obi anyị wee gaa ebe ndị nwere ọrịa COVID-19 na-eto eto. . Ndị na -eri nri na -achọ ka anyị gaa n'ụlọ nri ha n'agbanyeghị ọnọdụ nje anyị. Ozi ahụ na-agba anyị ume ijide kaadị kredit, ụmụaka, ezinụlọ na ndị enyi wee nọrọ awa ole na ole sochirinụ rie ma drinkingụọ n'ime oghere (s) nwere ike ọ gaghị enwe sistemụ HVAC ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ ndị ọrụ nwere ihu na ihu.
Tonye isi ụlọ ọrụ anyịismismp ka ga -ekweta na ihe omume njem, ọkachasị njem, bụ ụgbọ maka mgbasa ọrịa; ụlọ ọrụ kwesịrị ịnọ na mbido mgbochi ọrịa - ịchepụta na mejuputa usoro ahụike na nchekwa, sistemụ na usoro. Ndị ọrụ gọọmentị na -ahụ maka njem nlegharị anya kwesịrị ịkọwapụta ọrụ na ibu ọrụ ha n'ihu ọha, ebe ọ bụ na ha bụ njikọ dị n'etiti ọrịa na -efe efe na ndị mebere ha, na -etinye ha n'ọnọdụ igbochi ma ọ bụ machibido njem dị ka ihe maka ijikwa ihe egwu dị na mbufe nje.
COVID-19 emebela ọnọdụ njem nlegharị anya nke ejighị n'aka nke na-agaghị agbasasị. Ọbụlagodi mgbe COVID-19 abụghịzi ihe iyi egwu, nje ọhụrụ na ọrịa ndị ọzọ ga-achọ ụzọ ha ga-esi banye ụwa anyị, ọzọkwa ụlọ ọrụ ahụ ga-eche ihu ejighị n'aka (ya bụ, oge nsogbu, amụma nkwado sitere n'aka gọọmentị, ndị njem nleta omume).
Ozi gọọmentị na -efu
Nnyocha na-egosi na ozi COVID-19 gọọmentị na-akwado anaghị arụ ọrụ (ihe mgbagwoju anya karịa ihe ọmụma). Ozi ndị a na -agbagharị n'ihi na ha anaghị erute ahịa ndị eburu n'uche na anaghị enye ozi na -agbanwe agbanwe nke bara uru ma baa uru.
Ụlọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ, ndị njem, na ndị njem nlegharị anya na -arụkwa ọrụ n'ịmepụta vidiyo ndị nwere ọmarịcha ndị ọrụ ụgbọelu na -agba egwu na ndị na -eche nche na skateboard; agbanyeghị, ozi ndị a anaghị eru ahịa ahịa. Maka gịnị? N'ihi na n'ihe gbasara ụlọ ọrụ njem, ha anaghị agwa ndị na-eme mkpebi njem, ụmụ nwanyị, na ịghara ịtụ egwu njem ha n'oge COVID-19.
New York bụ chọrọ asambodo ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19s maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile metụtara njem.
Ụmụ nwanyị na -elekwasị anya
A bịa n'ihe gbasara nchekwa na nchekwa, ụmụ nwanyị na -achọkarị ihe karịa ụmụ nwoke n'ihe gbasara nchekwa ha kwesịrị idobe ma ọ bụrụ na ha 'ga -enwe' nchekwa mgbe ha na -eme njem.
Usoro iwu ha na -achọ gụnyere ịdị ọcha, iji ọgwụ nje, ịdị adị ahụike na nyocha ozi nke ndị ọrụ ahụike gbaara ezi ama (ya bụ, ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị na -ahụ maka ahụike), asambodo gọọmentị sitere na isi mmalite ndị tụkwasịrị obi (ntụgharị, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ọgwụ) , na mkpebi nlekọta ahụike dabere na data sayensị ọ bụghị na mkpali ego.
Ụmụ nwanyị na -atụ anya na ụlọ oriri na nkwari akụ ga -enye nhicha miri emi na ọtụtụ ndị ọrụ aka ịsa aka. Ndị ọbịa na ndị ọrụ kwesịrị ikpuchi ihe, ekwesịrị ịsachapụ ma kpochapụ oghere ọha na usoro edepụtara wee gụnye oghere nkịtị, ebe ịkpọtụrụ (ya bụ, ụzọ ụgbọ oloko, tebụl, aka, sinks).
Ime ụlọ egwuregwu kwesịrị ịdị na oghere (s) ka a ga -ehichapụ ya na igwe mbuli na igwe mbuli elu. Ihe eji enyere ndụ aka n'ime ụlọ dị ka ihe nlegharị anya telivishọn, mgbanyụ ọkụ, na ihe na-ekpo ọkụ ọkụ ga-abụrịrị akụkụ nke usoro iwu. Ịkwụ ụgwọ maka ọrụ niile kwesịrị ịbụ elektrọnikụ na ihe nhicha aka nke mmanya na-egbu dị n'ala ọ bụla n'ọnụ ụzọ ụlọ oriri na ọ foodụverageụ na ihe ọverageụverageụ. Ekwesịrị ka ewepụ ma ọ bụ megharịa kọfị ka ọ bụrụ ndị ọrụ.
Ụmụ nwanyị chọrọ ịga njem ma nwee ego ha ga -emefu. Ahụmịhe njem na -enye ụzọ mgbapụ site na usoro ị na -eme kwa ụbọchị ka ị na -enye ohere maka njikọta mmekọrịta na ihe ụtọ hedonic. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ụmụ nwanyị belatara oge njem ha na nyocha (Brooks na Saad, 2020) chọpụtara na 60% nke ụmụ nwanyị bi na US na-atụ ụjọ ma na-echegbu onwe ha maka ibute COVID-19. Ọmụmụ ihe ọzọ chọpụtara na egwu, ịkpọasị, na iwe mgbe ụfọdụ abụrụla azịza mmetụta uche metụtara ichebe nchekwa anụ ahụ ha n'oge COVID-19. Ndị njem nwanyị na -ahụ ihe egwu ahụike sitere na nje a, na -eme ka ha nwee nkụda mmụọ na oge na -amalite ịtụ ụjọ. Ozugbo egwu maka ihe egwu ahụike chere na nje nwere ike bụrụ mmetụta kachasị, ha na -ezere ụfọdụ omume dịka njem.
Iji belata egwu njem ha, ụlọ ọrụ ahụ ga -akwụsị ụzọ silo nke na -ekewa ụlọ ọrụ ahụ ma na -ewepụta ozi agwakọta. Site na -arụkọ ọrụ ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye njikọ n'etiti ngalaba niile na -eme ka ahụmịhe njem ahụ ghara ịtụ ụjọ. Njem gaa/site na ebe ị ga -enweghị ntụpọ, site na njem ụgbọ ala gaa na ụgbọ elu ụlọ na nke mba, ebe obibi, na iri nri nwere ụkpụrụ ahaziri nke ọma na -ahụ nke ọma na njem ahụ dum.
Ngalaba ọha na nkeonwe nwere ibu ọrụ njem nlegharị anya kwesịrị ịkekọrịta echiche ha na ndụmọdụ ha na nzukọ a na -amachibidoghị ya na ndị ndụmọdụ mmekọrịta ọhaneze emeghị ka ọ hazie ya. Ndị mgbasa ozi na ndị na -eri ihe aghaghị ịma ma ghọta usoro echiche maka mkpebi a na -eme njem (ma ọ bụ na ọ bụghị); imeghe ókèala (ma ọ bụ na ọ bụghị); iji guzobe usoro nchekwa, idebe ihe ọcha, na usoro nchekwa (ma ọ bụ na ọ bụghị); ma ọ bụrụ na enwere mgbanwe, ihe kpatara ọdịiche ahụ.
Ndị isi ọhaneze na nkeonwe niile na ndị na -azụ ahịa kwesịrị isonye na imewe, mmejuputa iwu, na iji ngwaahịa ahụike ọhụrụ, sistemụ na usoro yana akụkụ agbakwunyere na kwụ ọtọ. Onye ndu kwesịrị isi na ụlọ ọrụ, dabere na ike ọ bụghị na njikọ gọọmentị ma ọ bụ mmetụta onwe onye, ​​ma ọ bụ akụnụba.
Iji belata egwu ma belata ihe egwu metụtara njem COVID, ụlọ ọrụ ahụ ga -emerịrị:
1. Kwuo ohere niile amaara maka ịgbasa nje (nyocha ahụike nke ndị ọbịa na ndị ọrụ kwa ụbọchị).
2. Na -achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ndị ọbịa tupu ịnakwere ndoputa na ndebanye aha.
3. Mee ka ndị mmadụ ghara ịdị n'otu n'oge njem na ebe obibi.
4. Debe ihe mgbochi anụ ahụ n'etiti ndị njem, ndị ọbịa, na ndị ọrụ.
5. Machibido mmadụ karịrị akarị n'ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ elu, ebe nkiri, ihe omume, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ.
Ọhụrụ ọhụrụ ga -abụ ihe kwesịrị ekwesị n'etiti ijigide ahụmịhe na -eju afọ maka ndị njem na ịgbaso usoro siri ike nke ndị ọchịchị mere maka usoro nchekwa na ịdị ọcha.
Ekpebiela uche m
Ọ bụrụ na ịdọ aka na ntị niile na "ọ bụrụ na ọ bụrụ" emebeghị ihe doro anya… iji yigharị njem, ajụjụ ndị chọrọ azịza tupu inyefe ndị nnọchi anya njem gụnyere:
1. Kedu ọnụego COVID-19 gbasara ebe a na-aga? Onu ogugu oria na/ma obu onwu di elu ma obu gbadaa?
2. Kedu ọnụego COVID-19 gbasara n'obodo gị?
3. Ị ga -enwe ike ịwepụ onwe gị (ma ọ dịkarịa ala 6 ụkwụ) n'ebe ndị gị na ha na -eme njem nọ?
4. Ndị enyi/ezinụlọ njem gị nọ n'ihe egwu dị elu maka COVID-19?
5. Gị na onye COVID-19 nwere nnukwu ihe ize ndụ?
6. Ọchịchị steeti ma ọ bụ mpaghara ebe i bi na/ma ọ bụ ebe ị na -aga ga -achọ ka ịnọpụ iche maka ụbọchị 14 ka ị gachara?
7. Ọ bụrụ na ị na-arịa COVID-19, ị ga-atụfu ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ?
8. Ọ bụrụ na ị na -arịa ọrịa mgbe ị na -eme njem, kedu usoro iwu ndị gọọmentị (s) chọrọ yana kedu ọnọdụ ahụike (ụlọ ọgwụ, ndị dọkịta, ọgwụ) na ebe ị na -aga? Mkpuchi mkpuchi gị ọ ga -ekpuchi ụgwọ ndị a?
Na-aga n'ihu na ịkpachara anya
Ọ bụrụ na ọnọdụ njem gị bụ ụgbọ ala, ime atụmatụ njem tupu njem ahụ chọrọ nhicha na mkpochasị nke ụgbọ ala. Ekwesịrị ihichapu ebe niile (windo, eriri oche na eriri, steering ụgbọ, aka ụzọ, njikwa, ala, wdg). Na mgbakwunye na nri na mmiri, nwee nkwado ndabere nke ihe nhicha nje na ihe nhicha aka. Ozugbo mmadụ niile nọ n'ụgbọala, mepee windo mgbe o kwere omume. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, jiri A/C ma tọọ ikuku ikuku ka ọ bụrụ ọnọdụ adịghị emegharị.
Debe ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -eme njem n'otu ụgbọ ala ma mee ndokwa ka onye ọ bụla yi nkpuchi (ebe ọ dị, ọ bụghị dị ka akwa akwa). Ịkwụsị maka gas ma ọ bụ nri nri? Họrọ onye na -agba ọsọ maka gas na/ma ọ bụ nri nri - onye na -anọghị n'ihe egwu. Ndị “na -agba ọsọ” ga -ekpuchi nkpuchi kpamkpam ma nwee aka dị ọcha/dị ọcha tupu ha abanye n'ụgbọ ala.
Jenụwarị 21, 2021, iwu gọọmentị etiti kpebiri na ọ bụ “imebi iwu gọọmentị ịghara iyi mkpuchi ihu n'ụgbọ njem ọha (Ntuziaka CDC). Fgbọ elu azụmahịa niile kwesịrị ịchọ ka ndị njem kpuchie nkpuchi ihu (gụnyere ụmụaka gbara afọ 2 ma ọ bụ karịa). ”
Atụkwasịla onye ọ bụla obi! Ị maghị onye nọ ọdụ n'akụkụ gị, n'ihu gị, yana ahịrị 3 n'azụ gị - yabụ Gbanyụọ! Tụkwasị na nke a, debe aka gị nke ọma ma zere imetụ ihu, ihu gị, na akụkụ ahụ gị ndị ọzọ aka.
Site na ndị mgbasa ozi na ndị ọrụ ahụike na -atụ aro ka eme ihe n'èzí, ịga ogige na -abawanye. Ọ bụrụ na ị kpebie ịdebanye aha maka ọgwụgwọ oke ọhịa, chọpụta ogige ntụrụndụ dị nso n'ụlọ (nke a na-ewere dị ka obere ihe egwu) na kpọtụrụ njikwa ogige iji chọpụta ma ụlọ ọrụ ahụ na-ezute ụkpụrụ COVID nwere ụlọ mposi mepere emepe ma dị ọcha (gụnyere mmiri pọmpụ, akwụkwọ mposi, ncha, na akwa nhicha a na -atụfu). Ebe egwuregwu a na -emeghe ma na -ezute ntuziaka CDC maka ịdị anya na ịdị ọcha? Ọ bụrụ na ogige ahụ na-enye ọdọ mmiri, ebe ịsa ahụ ọkụ, ma ọ bụ mpaghara egwuregwu ndị ọzọ dabere na mmiri, kedu usoro a na-eji echebe ndị ọbịa na COVID-19 n'efu?
Ọ bụrụ na gị na/ma ọ bụ ndị gị na ha na-eme njem na-arịa ọrịa, nwalere nke ọma ma ọ bụ kpughere na COVID-19-AGAla, na agbanyeghị ọnọdụ ahụike, agatụla ugboro ugboro n'ogige ntụrụndụ.
Tupu ịkekọrịta ozi kaadị kredit iji dobe ụlọ, nyochaa ụlọ oriri na ọ hotelụ orụ ma ọ bụ mmemme nhicha ụlọ (ngwaahịa ejiri, ugboro nhicha, ọ bụrụ na ndị ọrụ kpuchiri ihu ma nwee ihu ọchị, a ga -enwe oghere efu awa 24 mgbe otu onye ọbịa pụọ, ị weghara oghere?).
Ikekwe ọ kacha mma ihicha oghere nke gị (naanị ijide n'aka). Weta ihe nhicha kachasị amasị gị ma mee ka ịdị ọcha dị n'ihu gị na ndị enyi/ezinụlọ gị enweghị ohere.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ewe ihe egwu ma na-eme atụmatụ ime njem na-anataghị usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nweta nnwale nje ụbọchị 1-3 tupu ọpụpụ. Yiri ihe nkpuchi n'ụgbọ njem ọha niile na oghere ime ụlọ (gụnyere ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ oloko). Zere igwe mmadụ ma nọrọ opekata mpe 6 ụkwụ - naanị ihe gbasara mmadụ niile. Jiri aka na-ehicha ihe nchacha nke nwere ọ dịkarịa ala pasent 60 na-asa aka ma na-eme ka aka gị dị ọcha. Ekwesịrị ịmegharị ule ahụ ụbọchị 3-5 ka ị gachara njem wee dịrị njikere ịnọrọ n'ụlọ ma kewapụ onwe gị ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 7 ka njem gachara… ọbụlagodi na ị nwalee adịghị mma. Ọ bụrụ na ị nwalee nke ọma, kewapụ onwe gị ichebe ndị ọzọ. Ịdịghị njikere ka a ga-enyocha gị ọzọ? Naanị nọrọ n'ụlọ iche maka ụbọchị iri ka ịlaghachite njem.
Maka ozi mmelite njem emelitere, ezigbo isi mmalite bụ: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
© Dr. Elinor Garely. Edemede nwebiisinka a, gụnyere foto n'ezie, enweghị ike imepụtaghachi na -enweghị ikike ederede n'aka onye dere ya.
Azụ Kathy ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 23, 2021 na 10:52
Ọ bụrụ na agbasoro iwu na arịrịọ ndị a, ụwa ga -aka mma.